Aqalka Sare oo ka horyimid muddo kordhinta uu maanta sameeyey golaha shacabka - Caasimada Online
Home Warar Aqalka Sare oo ka horyimid muddo kordhinta uu maanta sameeyey golaha shacabka
Aqalka Sare oo ka horyimid muddo kordhinta uu maanta sameeyey golaha shacabka
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamanka Soomaaliya Cabdi Xaashi ayaa ka hor-yimid oo sharci-darro ku tilmaamay go’aanka uu Golaha Shacabka muddo kordhin laba sano ah maanta ugu sameeyey hay’adaha dowladda.
Cabdi Xaashi ayaa tallaabadaas ku tilmaamay ‘mid hal dhinac ah’, oo uga sii dareysa xiisada doorashada, islamarkaana sharci darro ah oo gebi ahaanba baalmarsan sharciyadii dowladnimo ee dastuurka dalka ku dhisna.
Waxaa uu walaac ka muujiyey in qaraarka golaha shacabka ee labada sanno ugu kordhiyeen hay’addaha dowladda uu dalka u horseedo xasiloni darro siyaasadeeda iyo mif amni oo halis ah.
Cabdi Xaashi ayaa qoraalka ku yiri “Go’aanka halka dhinac ah ee Golaha Shacabka ee muddo-xileedkiisu dhammaaday wuxuu Dalka u horseedayaa xasilooni darro siyaasadeed oo ay wehliyaan khataro amni iyo xaalado kale oo aan hadda la saadaalin karin. Sida oo kale, go’aankaasi wuxuu sii fogeeyay xal laga gaaro doorashooyinka Dalka isaga oo si toos ah u baalmaray sharciyaddii dowladnirnada ee ku dhisnayd Dastuurka iyo shuruucda kale ee Dalka.”
Sidoo kale waxa uu madaxda sarre ee dalka usoo jeediyay inay kusoo laabtan xayndaabka sharciga, ayada oo go’aan ka gaarista doorashada loo marayo nidaamka wada-ogolka ee wada-hadalada dhinacyada isku haya doorashada oo muddooyinkii dambe ka socday Muqdisho.
Golaha shacabka ayaa maanta isugu yimid kulan uu ka maqan yahay Aqalka Sarre, kaasi oo ay ku meel-mariyeen muddo kordhin sharci darro ah oo uu guddoonku sheegay inay hab gacan taag ah ugu codeeyeen illaa 149-xildhibaan oo ka qeyb-galay kulankii maanta, kuwaas oo ka dooday sharci gaar ah oo jiheenayo doorashooyinka heer Federaal.
Tallaabada uu qaaday Guddoonka golaha shacabka ayaa uga sii dareysa xaalada dalka, oo maalmihii u dambeysay mareysay meel xasaasiya, lamana oga sida ay wax noqon doonaan, maadama ay mucaaridku ka biyo diidan yihiin muddo kordhinta sharci darrada.